Saikinosy Kenai, AK • Fanorana amin'ny vatana sy fanorana NuRu
Ilay tany soa
Saikinosy Kenai dia saikinosy lehibe iray miala eo amin'ny morontsirak'i Southcentral Alaska. Ny anarana Kenai dia nalaina avy amin'ny teny hoe "Kenaitze" na "Kenaitze Indian Tribe", ny anaran'ny foko Athabascan Alaskan Native, ny Kahtnuht'ana Dena'ina ("Ireo olona manamorona ny Kahtnu (Reniranon'i Kenai)"), izay nonina ara-tantara ny faritra. Nantsoin'izy ireo ny Kenai Peninsula Yaghanen ("ilay tany soa"). Rehefa reraka ianao rehefa avy nandeha an-tongotra tontolo andro dia manasa anao izahay hamandrika amin'ny iray-of-a-kind fanorana erotika any amin'ny saikinosy Kenai, AK. Manontany momba Nuru ary Fantra.